UN-ka: Daacish oo ay Ogaaday In Wadamo Soomaaliya kamid Tahay ay Ka Heshay Lacag Dhan 30-Milyan oo Dollar
Xog-hayaha guud ee Qaramada Midoobay Banki Moon ayaa sheegay in kooxda Daacish ay lacago gaaraya 30-Milyan oo ay bishaani heshay kadib markii ay sako ahaan ugu qaadeen dadka ku kala nool wadamada Soomaaliya, Syria, Ciraaq iyo Liibiya.
Xoghaye Bank Mon ayaa sheegay in Qaramada Midoobay ay la socoto dhaq-dhaqaaq waliba oo ay kooxdaani sameyneyso isla markaana ay lacagaha ugu qaadaneyso qaab sako ahaan maadaama lagu guda jiro bisha Muxaram.
Banki Moon ayaa bogaadiyey dagaalka lagula jira waxa uu ugu yeeray urarada Arga-gixisada ee ay Daacish kamid tahay.
“Waa Muhiim ah in lasoo afjaro Koox sidaan oo kale dhaqaalo abuur ka sameysaneyso dadka sidoo kalane dunida ay ka degi la’ dahay” sida uu hadalka u dhigay.
Goobaha badi ay lacagaha ka helaan ayuu Xog-hayaha guud ee Qaramada Midoobay ku sheegay in ay kamid yihiin Goobaha ganacsiga sida: Shirkadaha Korontada, Kuwa Biyaha, Canshuuraha Gawaarida galaya goobaha ay maamulaan iyo waliba kuwa ka baxaya, Hantida sida kuwa Ma guurtada ah.
Ugu dambeyn Xog-hayaha guud ee Qaramada Midoobay Banki Moon ayaa dunida ugu baaqay in ay meel ugu soo wada jeestaan la dagaalanka Daacish iyo ururada la shaqeeya ee ka kala dagaalama Syria, Ciraaq, Soomaaliya iyo Libiya.
Waxa uuna shaaciyey in lacagaha ay qaadanayaan ay ugu gol-leeyihiin in ay ku qortaan jiilal cusub oo dhalinyaro ah oo kusoo biira si ay usiiyaan mushaaraadka Jiilalka ay qorsheynayaan in ay qortaan.
Qaramada Midoobay ayaa dhawaan sheegtay in kooxda Daacish laga dilay xubno Muhiim u ah howlgalkooda intii u dhaxeysay horaantii 2015 ilaa iyo sanadkaani daba yaaqadka u dhaw ee 2016-ka.